Fizahan-tany anaty ranomasina Journey-Assist Fitsangatsanganana an-dranomasina
Ny antsitrika mahazatra dia misy ny antsitrika scuba amin'ny halaliny hatramin'ny 40m. Afaka misitrika hatrany amin'ny 150m ny mpitsabo matihanina, ary vitsy dia vitsy ny mpanam-bola eran'izao tontolo izao no nahatratra 150m ny halaliny.
Fa ahoana kosa ny amin'ny halalin'ny halalin'ny ranomasina mihoatra ny 4000m? Io no nahatongavany ho azy fizahan-tany lalina anaty... Eny eny! Fizahan-tany marina! Tsy mila diplaoma avo lenta ianao handray anjara amin'ny fikarohana ny ranomasina ankehitriny.
Hatramin'ny 2009, dia orinasa amerikana Oceangate manolotra ny mpanjifany fitsangantsanganana anaty rano amin'ny sambo mpisitrika Antipodes sy Cyclops 1., izay afaka misitrika hatramin'ny halalin'ny 2000m.
Antipodika any an-dranomasina. (loharano - Оceangate.com)
Cyclopedia Submarine 1 (loharano - Oceangate.com)
Titan (Cyclopedia 2)
Ary nanomboka ny taona 2018, sambo mpisitrika Titan dimy (Cyclop 2) no navotsotra, afaka nilentika hatramin'ny 4000m lalina niaraka tamin'ny mpikambana ekipazy dimy. Ny sambo mpisitrika manokana miaraka amina toetra toy izany dia iray amin'ny karazany iray ankehitriny.
Ny fandehanana ataon'ny orinasa dia hampiaiky volana ny mpandeha liana. Iza no afaka mampita ilay dia mankany amin'ilay Titanic malaza, izay nitsahatra tamin'ny halalinna 3.8 km nandritra ny zato taona mahery.
Mazava ho azy, ny fahafahan'ireo sambo mpisitrika ireo dia tsy voafetra amin'ny dia tsotra sy fitsangatsanganana fotsiny. Mifanohitra amin'izany no izy, ampiasaina mavitrika amin'ny fikarohana sy tetik'asa ara-barotra amin'ny ambaratonga rehetra izy ireo. Mikaroha mineraly, fikarohana sambo sy fiaramanidina rendrika ao anaty ranomasina. Fandalinana ireo loharano geothermal sy olana mifandraika amin'ny ekolojia ny ranomasin'izao tontolo izao, ary maro hafa. Tanteraka izany rehetra izany.
Lalina lalina - hatramin'ny 4000m
Fahafahana - olona 5
Vatana - fibre karbonika sy titane
Refy ankapobeny - 6,7 mx 2,8 mx 2,5 m
Hafainganana - 5,5 km / ora
Fahaiza-mitondra - 1000kg
Fahaleovan-tena - 96 ora (olona 5)
Lalina lalina - hatramin'ny 500m
Vatana - vy
Hafainganana - 4 km / ora
Fahaiza-mitondra - 1043kg
Lalina lalina - hatramin'ny 305m
Refy ankapobeny - 4,2 mx 2,5 mx 2,7 m
Fahaleovan-tena - 72 ora (olona 5)
Ny fitsidihana isan-taona, izay misy fisitrihana ny Titanic, dia 8 andro. Vidiny isan'olona - $ 105. Ahitana olona 000 ny dia. Ahitana antsitrika 9 ny fitsidihana.